Tsvaga zviwi zvakanakisa kuGreek | Kufamba Nhau
Greece ine zviwi zvakawanda izvo zvataisakwanisa kuona zvizere, asi tinoziva kuti mamwe ndiwo makuru. Mazhinji acho ave nzvimbo dzevashanyi chaidzo uye akakosha pakunaka kwavo kukuru, nzvimbo dzekurota dzinotipa isu tsika dzakanaka uye nzvimbo dzakanaka. Ndokusaka tiri kuenda kunoona kuti ndeapi zviwi zvakaisvonaka kwazvo muGirisi.
En Girisi kune zviwi zvakawanda iyo inogona kushanyirwa, mazhinji acho anogona kusvikwa kubva kuAthens. Saka ita runyorwa rweenzvimbo dzaunofanirwa kuona kana uchironga kuona kona dzese dzeGreek. Mamiriro ekunze eMediterranean akakosha kuti unakidzwe nemabhichi ayo asinganzwisisike asi pane zvakawanda zvekuona.
Chitsuwa cheSantorini ndeimwe yenzvimbo dzinoshanya kwazvo muGrisi yese. Ichi chitsuwa chakanaka chiri pedyo neAthens nechikepe. Iyo Guta reOia nderimwe remapoinzi aro epakati uye nzvimbo yave kushanya kwazvo, ine pekugara zhinji. Asi zvakare inzvimbo inoyevedza kwazvo pachitsuwa ichi, iine dzimba dzayo chena dzine matenga ebhuruu uye maonero ayo egungwa, kunyanya panguva yekuvira kwezuva. Iwe unofanirwa kuburukira kuOld Port kuti uone zvidiki zvekuredza zvikepe, mhepo uye diki nzvimbo kuravira iyo yechiGiriki gastronomy. Fira ndeimwe yenzvimbo dzinodakadza nzvimbo dzevashanyi uye iwe unogona zvakare kuona mamwe mapoinzi senge Imerovigli, Pyrgos kana Megalochori. Kana ari mahombekombe ayo, kune mamwe akadai seRed Beach, rinozivikanwa zvakanyanya neruvara rwejecha rayo kana Perissa, yakanaka dema jecha gungwa.
Ichi chimwe chezvitsuwa zvikuru zveGreek, kwaive neColossus yeRhodes, chifananidzo chikuru chakaparadzwa mukudengenyeka kwenyika mazana emakore apfuura. Guta rayo repakati nepakati inzvimbo yakanaka kwazvo isingarasikirwe. Mukati meguta rino mune nzvimbo kufanana neyekare Calle de los Caballeros, mugwagwa wakanaka une cobbled kwaunogona kuona Imba yeGrand Master kana Chipatara de los Caballeros. Dzimwe nzvimbo dzinogona kuoneka ndiyo Archaeological Museum yeRhodes kana iyo Acropolis.
La Mykonos chitsuwa ndechimwe chevanonyanya kutsvaga, kunyanya sezvo chave chitsuwa uko kune nzvimbo zhinji dzekupemberera uye kunakirwa. MuMykonos unofanirwa kunakidzwa neguta rekare reChora, uchifamba nemumigwagwa yaro nekuwana dzimba dzakanaka munzvimbo dzakaita senzvimbo yeKastro. Iwo maKato Milli mills atove institution pachitsuwa uye kubva kunzvimbo yavo isu tine maonero akanaka kwazvo. Unofanirawo kuona chiteshi chekare, nzvimbo yaunogona kuwana maresitorendi, uye Little Venice, inzvimbo yayo inoyevedza pamberi pegungwa.
Corfu Town pachitsuwa chezita rimwe chete inzvimbo yekumira sezvo iine zvakawanda zvekupa. La Spianada ndiyo imwe yemakwere mahombe kuGreek, padyo nepatinogona kuona Imba yeSan Miguel neSan Jorge, uko iyo Museum yeAsia Art iri. Dzimwe nzvimbo iImba yeMambokadzi Sissi, inova Achilleion Palace umo Empress Sissi vakatizira kana mahombekombe makuru eCorfu.
La volcano chitsuwa cheMilos ndeimwe yatinogona kushanyira. Iyo ine makungwa angangoita makumi manomwe uye ine nzvimbo zhinji dzine jecha kwaunogona kunakirwa nemamiriro ekunze akanaka, seSarakiniko kana Paliorema. Kleftiko imwe pfungwa yekufarira, kuumbwa kwedombo pakati pegungwa netiweki yemapako. Makosi emakuva eMilos muTrypiti ndevamwe vekare akawanikwa, aine chikamu chidiki chakavhurwa ruzhinji Isingarohwe Plaka, guta guru reMilos, nedzimba dzayo chena dzinoyevedza pamwe nemutambo wayo weRoma wakatarisana negungwa.
Krete ndiyo imwe nzvimbo yenhoroondo, pamwe chete nechitsuwa chakanakisa. Pachitsuwa ichi unogona kudzidza zvakawanda nezvebudiriro yeMinoan, imwe yevakuru vekare anozivikanwa muEurope. Saka ndiyo ngano inozivikanwa ye minotaur. Nhasi zvinokwanisika kushanyira iyo Knossos Palace, makiromita mashoma kubva kuHeraklion. Muguta rino tinowana nzvimbo ine nhoroondo ine migwagwa yakanaka, nzvimbo dzinodzikisira nenzvimbo dzakadai seKoules fortress kana Cathedral yeSan Minas. Rimwe guta risingafanire kupotsa iChania, nzvimbo yerunako rukuru, inoteverwa neakakurumbira Elafonisi gungwa.
Ichi chitsuwa chiri chezviwi zveIonia muGirisi. Dzinga mahombekombe mazhinji akaita seNavagio, ine mawere anoshamisa uye ngarava yakadzikira mujecha. Mufananidzo wake ndeimwe yeanozivikanwa pachitsuwa ichi, inova nzvimbo yekurota. MuZante mune dzimwe nzvimbo dzepanyama dzisingafanire kupotsa dzakaita seBlue Caves.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Zvitsuwa zvakaisvonaka kwazvo muGirisi